HAYSASHADA DOOFAAR XAYDHA XAYAWAAN U LEH SIDA XAYAWAANKA - EEYAHA
Haysashada Doofaar Xaydha Xayawaan u leh sida Xayawaanka
'Kani waa Petunia, doofaarkayga casaanka leh ee casaanka ah ee 8 bilood jira. Waxay ku fariisataa isboortiga, waxay ku ciyaareysaa biyaano, wey fariisataa, jiifsataa, mowjado ayayna ka booddaa hooyinka. Waxay ku dul socotaa xadhig, waxay la seexataa bisadda oo aad ayey u macaan tahay. '
Doofaar caloosha kujiidan
Tijaabooyinka asalka ah ee la keenay Mareykanka 1980-meeyadii waxay ahaayeen madow. Hadda dhowr nooc ayaa la heli karaa oo ay ku jiraan cawl, caddaan, tan iyo casaan. Barxadda (ama ”pinto”) waxay umuuqataa inay tahay kala duwanaansho doorbidaya milkiileyaal badan.
Doofaarro caloosha ku jira ayaa ah doofaarro cabbirkoodu yar yahay oo ku habboon nolosha gudaha haddii si habboon loo tababbaray. Inta badan cabirkoodu wuxuu u dhexeeyaa 13-20 inji dherer wuxuuna kori karaa ugu badnaan 200 rodol. Waa xayawaan xiiso leh oo leh dabeecad kaftan ah iyo sirdoon kaliya labaad ka xiga kan eeyga. Iyagu maahan cunno cunno badan, gurigana waa lagu tababaran karaa.
Doofaarro caloosha ku jira ayaa xayawaan u noqday xayawaanka moodada ah ee Maraykanka horraantii 1980-meeyadii ilaa bartamihii 1990-meeyadii. Nasiib darrose milkiileyaal badan ayaan si ku filan wax uga baran daryeelka iyo dayactirka doofaarka caloosha ku jira calool xumada qaar badanna waa lagu dayacay ururadii dhowaan la aasaasay ee 'doofaarka lagu xanaaneeyo' iyo 'badbaadinta doofaarka'. Tan iyo wakhtigaas, macluumaad badan ayaa la daabacay ururro ayaa la sameeyay si ay u siiyaan milkiilaha doonaya inuu helo ilo ku filan oo uu ku ilaaliyo xayawaanka mustaqbalkiisa caafimaad iyo ilaalintiisa.
Dabeecadda doofaarkaaga dheriga caloosha ku jira ayaa kala duwanaan doona. Ragga waxay u muuqdaan kuwo dagaal badan oo 'madax xiir' markay weynaadaan, gaar ahaan haddii aan la dhex-dhexaadin. Dumarku waxay noqon karaan dhul ahaan markay uurka leeyihiin. Doofaarrada badankood waxay mari doonaan sannado 'dhallinyarnimo' markay bislaadaan. Marxaladani waa goorta ay tijaabinayaan soohdimahooda oo ay arkayaan meesha ay adiga kaa gelin karaan sida ay u kala sarreeyaan. Mulkiilaha ayay ku xiran tahay inuu hubiyo in doofaarku ku barto booskiisa saxda ah ee 'lo'da.' Milkiiluhu waa inuu doofaarka ka kasbadaa “inuu kasbado” cuntadiisa iyo dawayntiisa, sidaas awgeedna uu meel mariyo xaqiiqda ah in milkiilaha uu yahay “alfa”. Inta lagu jiro marxaladdan doofaarku wuxuu sameyn karaa maqal “xul ah” oo uu iska indhatiri karaa amarrada milkiilayaasha. Mulkiilaha ayey ku xiran tahay inuu si joogto ah oo isku mid ah u dhaqan geliyo tallaabo kasta oo doofaar ah. Haddii aan la sifeynin doofaarku wuxuu noqon karaa mid aan nidaamsaneyn waana tan, nasiib daro, waqtiga marka doofaarrada badankood looga tago hoyga iyo samatabbixinta. Maaha doofaarrada qaladka ee waa aqoon la’aan dhanka mulkiilaha ah. Fadlan hubso inaad diyaar u tahay mas'uuliyadda lahaanshaha xayawaanka ka hor intaadan iibsan xayawaankaaga. Noloshiisu adiga ayey kugu xidhan tahay.
Doofaarka bislaaday dhererkiisu waa 13-20 inji, oo celcelis ahaan culeyskiisu yahay 130-150 rodol, laakiin cabirkiisu wuxuu u dhexeyn karaa 90-175. Cunitaanka / xad-dhaafka xad-dhaafka ahi wuxuu u horseedi karaa cayil doofaarkaaga, taasoo keenta culeys si fiican uga badan 200 rodol.
Ma jiraan wax la yiraahdo “doofaar yar” ama “doofaar-koob shaah”. Xayawaanadan ayaa hiddo ahaan loo hiddeeyay si loo yareeyo cabirkooda. Samee cilmi baaristaada ku saabsan soosaaraha ka hor intaadan wax ka iibsan qof sheeganaya inay soo saaraan 'miniatures,' iwm. xayawaanka rabaayadda ah
Bannaanka banaanka ayaa sidoo kale siinaysa doofaarkaaga awood uu kaga shaqeyn karo tamar dheeri ah oo aysan ku sameyn karin gudaha. Haddii guryahooda looga tago iyaga oo aan lahayn wax laga baxo oo ay ku xareeyaan tamarta, milkiilayaashu waxay u arki doonaan doofaarka inuu yahay mid xanaaq badan oo wax duminaya. Doofaarrada caloosha ku jira ayaa ku farxi doonin inay ku noolaadaan meelo kooban (sida guryaha, guryaha yar yar, iwm.). Doofaarro caloosha ku jira ayaa qadarin doona 'buul' noocyo ah oo loogu yeero tooda. Sii sariir busteyaal jilicsan ama xitaa sariir ey weyn. Tani waxay u noqon doontaa hoy ay ku hoydaan waxayna ku heli doonaan raaxo halkaas markay walbahaaraan. Haddii aadan siinin buul ku filan oo ay jeceshahay, waxaad ogaan kartaa in xayawaankaaga xayawaanku ay burburin doonaan qaar ka mid ah qalabka gurigaaga si ay u siiyaan buul badan oo uu jecel yahay. Qalabka kale ee xayawaankaaga aad doorbideyso sariirtiisa waa kaararka kaararka la jeexjeexay, bustayaal la jeexjeexay, ama xiirashada qoryaha.
Haddii doofaarkaaga caloosha ku jira uu tababaran yahay waxaad u baahan doontaa inaad nadiifiso saxankiisa qashinkiisa sida loogu baahdo. Joogtayntu waxay ku xirnaan doontaa cabirka iyo da'da xayawaankaaga la korsado.
Qaar ka mid ah PBP-yada waxay doorbidi doonaan inay yeeshaan sariir ka samaysan qoryo xiirashada ama kartoonno jarjaran ama busteyaal duug ah. Hubso inaad nadaafadda ku ilaaliso meelahaas oo aad u tuurtid gogol jireed markii loo baahdo. Haddii aan wax laga qaban meelahaas waxay sababi karaan infekshinka bakteeriyada, iwm.
Xayawaankaaga xayawaanka ah ayaa laga yaabaa inuu ku raaxeysto qubeyska. Dhinaca kale, isagu ma noqon karo. Ka hubi jaakada xayawaankaaga calaamadaha cudurka ama dhaawaca. Sidoo kale iska hubi shilinta. Doofaarkaaga uma badna inuu ku dhaco boodada, laakiin shilintu waxay u keeni kartaa cudur xayawaankaaga. Weydii dhakhtarkaaga xoolaha calaamadaha iyo astaamaha cudurka ee ka dhasha qaniinyada shilintu.
Adigu hilbaha doofaarka waxaad u baahan doontaa in la jaro 1-2 sano kasta iyadoo kuxiran xaddiga jimicsiga uu helo. Doofaarka si joogto ah u socda wuxuu lahaan doonaa hoolal u baahan fiiro gaar ah marka loo eego doofaarka fadhiga ku jira. Sidoo kale, doofaarka fadhiidka ah waa doofaarka baruurta tanina caafimaad uma ahan doofaarkaaga. Sii isaga nafaqo habboon oo ay ku jiraan roughage dheeraad ah, miraha iyo khudradda.
Doofaarkaagu wuxuu kaloo yeelan karaa faan-fiiqyo guud ahaan u baahan doona in la ilaaliyo (la jaro) sannad kasta ama laba-jeer. Tan ayaa wax laga qaban karaa isla marka aad helaysid jeexjeexa doofaarkaaga, maaddaama labadaba nidaamyadani badanaa u baahan doonaan khibrad dhakhtar xoolaha ah. Doofaarkaaga, iyadoo kuxiran dabeecaddiisa, MAY wuxuu kuu oggolaanayaa inaad jarjarooyinkooda googooyada. Kaliya iskuday tan hadaad ogtahay waxaad samaynayso. Waad dhaawici kartaa cagaha xayawaankaaga oo waxaad sababi kartaa caabuq.
shaybaadhka iyo collie eeyaha isku darka
Inta aad ku jirtid dhakhtarka xoolaha waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad ku cusboonaysiiso doofaarkaaga tallaalkiisa. Tallaallada qaarkood way ku kala duwanaan doonaan meesha lagu qabanayo. Kala tasho dhakhtarkaaga xoolaha tallaalada gaarka ah ee looga baahan yahay aaggaaga.
Adiga doofaarka ah sidoo kale waxaad u baahan doontaa in lagu diro. Kala tasho dhakhtarkaaga xoolaha daawada ugu fiican.
Doofaarku wuxuu leeyahay nabarro halkii timaha laga yeelan lahaa. Tani waa nooc timo jilicsan oo si yar u daboolaya jidhkooda. Waxay daadin doonaan timaha sannad kasta. Qaar baa dhaha hadaad cagta mariso nabarrada doofaarka hubaal waad ogaan doontaa! Maaddaama timahoodu yar yihiin, doofaarro midab khafiif ah leh ayaa u nugul qoraxdu waxayna u baahan yihiin difaac sida qorraxda carruurta.
Bilaha kuleylaha ee heer kulka uu sii kordhayo, doofaarkaaga u yeel har iyo meel aad ku qaboojiso. Waxay ku qaddarin doonaan barkadda carruurta ee leh biyo ku filan si ay isugu qaboojiyaan maaddaama aysan lahayn qanjirro dhidid ah oo nidaamiya heerkulka jirka.
Taranka cunsurigu waa dhibaato weyn oo haysata doofaarrada caloosha ku jira. Hubso inaad baartid abuurkaaga kahor intaadan iibsan oo aad ogaatid waxa aad raadineyso ee u ekaanta xayawaanka. Taranka / taranka iskutallaabta waxay sababi kartaa cilado dhowr ah sida ciladaha sanka oo suurto gal ah halkaasoo doofaarku ugu dambeyn ugu dambeyn doono geeri neef qabad leh sababtuna tahay awood la'aanta inuu si fiican u neefsado. Arrin kale oo la xiriirta taranka qaldan waa la'aanta furitaanka futada. Tani waxay ku kaliftaa doofaarku inuu awoodi waayo inuu baabi’iyo qashinka oo xayawaanku wuxuu aakhirka u dhiman doonaa geeri gaabis ah oo xanuun badan. Qallooca wadajirka iyo lugta ayaa dhici kara. U fiirso iibsi kasta oo suurtagal ah xagga socodka socodka. Cilladaha qaarkood (sida arrimaha wadajirka / godka godka ama lugaha oo gaagaaban) ma muuqan karaan illaa nolosha dambe. Dhibaatooyinkan wadajirka ah waxay u horseedi karaan curyaannimo arthritis .
Tani waxay noo horseedaysaa in aan xayawaankaaga xayawaan guri u liidno / daadino. In kasta oo soo-saarayaasha badani riixayaan arrinta haysashada doofaarro tayo leh oo dheriga caloosha ku jira oo iibiya, haddana ugu dambayn waa mas'uuliyadda milkiilaha inuu xayawaankiisa ama xayawaankiisa xayawaan ka dhigto. Waxaa macquul ah sababta ugu wanaagsan ee gabadhaada loo badbaadiyo inta ay yartahay waa faa iidooyin caafimaad. Cunsurrada halista ah iyo sidoo kale walaaca fekerka ayaa yaraaday haddii doofaarkaaga dheddigga ah la siibo inta aysan gaarin 6 bilood. Marka ilmo-galeenka iyo labada ugxan la soo saaro, waxaad baabi'isay suurtagalnimada wareeggaaga kuleylka ee joogtada ah ee doofaarkaaga, kaasoo dhaca 21-kii maalmoodba mar. Xayawaankaaga xayawaanka ahi mar dambe ma raadin doono doofaarka ugu dhow, iyo infekshannada ka iman kara, kansarka , iyo dhibaatooyinka kale ee ku lug leh xubnaha taranka waa la tirtiraa.
Sida kor ku xusan, doofaarro lab ah oo laga filayo inay noqdaan xayawaan waa in la dhexdhexaadiyaa ka hor inta aan guriga la keenin. Doomaha ayaa awood u leh inay aabe qashin ku daadiyaan sida ugu horreysa da'da 8 toddobaad! Aad bay u yihiin 'xamaasad' wayna adag tahay in loo haysto xayawaan ahaan haddii aan la dhexgelin. Ragga xannibaadda ah, ee loo yaqaan barrow, waxay ku raaxeysan doonaan nolol ka madax bannaan kansarrada, infekshannada, iyo dhibaatooyinka kale ee ku lug leh xubnaha taranka.
Doofaarro caloosha ku jira ayaa ah, si fiican… doofaarro. Waxay cuni doonaan wax uun. Tani waxay dhaawac ku tahay caafimaadkooda. Milkiileyaasha waa in lagu baraa nafaqada saxda ah iyo cuntada doofaarkooda caloosha ku jira Haddii lagu badsho, ama la quudiyo cunto aan habboonayn, waxay noqon doonaan kuwo aad u cayilan. Tani waxay u horseedi kartaa simbiriirixan arrimaha caafimaadka ee xayawaankaaga. Doofaarradu way ku faraxsan yihiin “xididka” cuntada. U oggolow xayawaankaaga inay dibadda joogaan oo ay wasakhda wasakhda ka qaadaan. Barxaddaada ayaa daaq culus ka qaadi doonta doofaarka. Tan maskaxda ku hay ka hor intaadan iibsan xayawaankaaga rabaayadda ah. Xayawaankaaga xayawaanka ahi wuxuu door bidaa inuu cuno dhirta iyo cayayaanka. Xayawaanka gudaha ku jira waxaa lagu quudin karaa cunto gaar ah oo ah doofaarka doofaarka kaas oo ah quudin si gaar ah loo sameeyay oo bixisa nafaqooyin muhiim ah iyo nafaqooyin ay xayawaankaaga u baahan doonaan inuu caafimaad ahaado. Adiga oo quudinaya doofaarkaaga doofaarka ah waxaad sidoo kale naftaada u sameyneysaa doorka xaddidaadda kaloriintooda. Tani waxay ka ilaalin doontaa xayawaankaaga inuu weynaado oo ay adkaato in la maareeyo. Xayawaankaaga xayawaanka ah waxaa laga yaabaa in lagu siiyo daaweyn caafimaad sida miro iyo xoogaa haraaga cuntada ah, abaalmarin ahaan, laakiin waa inaan lagu badin.
Maskaxda ku hay in ay jiraan dhowr dhir oo sun u ah doofaarkaaga dheriga caloosha ku jira. Samee cilmi baaris si aad u aragto dhirta u dhalatay deegaankaaga ee waxyeeleyneysa xayawaankaaga. Dhir badan oo guryaha ka mid ah ayaa khatar ku noqon kara xayawaankaaga. Dhirta guryaha ku hay meelaha sare si aysan xayawaankaaga xayawaanka ah u heli karin.
Doofaarro caloosha ku jira waa xayawaan lo 'ah waxayna si fiican uga jawaabaan xaaladaha nololeed ee bannaanka halkaasoo la siinayo meel ballaadhan oo ay ku xididdo iyo qodid. Tani waxay siineysaa awood ay ku soo helaan nafaqooyinka muhiimka ah ee jirkoodu u baahan yahay. Doofaarrada caloosha ku jira ayaa loo tababbari karaa inay ku dul socdaan xadhig waxayna si weyn uga faa'iideysan doonaan jimicsiga ay ku heli doonaan socod joogto ah. (Ku socoshada shubka ama laamiga waxay ka caawineysaa inay hoouskooda ku maydhaan iyaga oo aan booqasho qaali ah ku tagin dhakhtarka xoolaha.) Hubso inaad haysatid meel ku filan oo doofaarkaaga ah oo uu ku meeraysto. Markuu doofaarku korayo, ayaa sidoo kale baahidiisa qolku u ballaadhan tahay. Hubso inaad ku siin karto faa'iidadan caafimaadkiisa ka hor intaadan iibsan xayawaan rabaayad ah.
Xayawaankaaga xayawaanku wuxuu gaadhayaa xajmi buuxa qiyaastii 3-4 sano jir wuxuuna yeelanayaa nolol 10 ilaa 15 sano ah taas oo ku xidhan dadaalkaaga daryeelka caafimaadkiisa.
Doofaarro caloosha ku jira ayaa ah xayawaanka afraad ee ugu caqliga badan, waana la tababaran karaa amarrada sida 'fadhiiso' iyo 'jiifso,' waxaana loo tababaran karaa qashin ama guryo ayaa loo tababaran karaa. Maskaxda ku hay in sirdoonkan lagaa soo jeesan karo. PBPs waxay karti iyo kartiba u yeelan karaan furitaanka albaabbada (bannaanka u baxa, qaboojiyaha, kabadhada kiimikada, iwm).
Lid ku ah odhaahdii hore ee ahayd 'Waxaad u urinaysaa sida doofaarka oo kale,' doofaarrada dheriga-caloosha ku jira ayaa leh wax ur ah.
Boar - doofaarka lab
Sow - doofaarka dheddigga
Gilt - doofaarro dheddig dhallinyar ah oo aan geyn qashin
Petunia doofaarka casaanka leh ee caloosha ku jira ee 8 bilood jira iyada Aussie iyo bisad saaxiib
Petunia doofaarka casaanka leh ee digaaga leh ee 8 bilood jira oo baalashiisu qoorta ku jiraan
Petunia doofaarka casaanka leh ee digaagga leh ee 8 bilood jira oo baalal xiran
shaybaarka madow iyo feer isku qasan eeyo
Petunia doofaarka casaanka leh ee digaaga leh ee 8 bilood jira oo ubax qoorta u saaran
Petunia doofaarka casaanka leh ee caloosha leh ee 8 bilood jira iyada iyo saaxiibkeed bisad
Petunia doofaarkii casaanka ee caloosha kujiray ee 8 bilood jiray dhamaantood way labbisteen
Petunia doofaarka casaanka leh ee casaanka ah ee 8 bilood jira oo u labbisan sida bocorka
Petunia doofaarka casaanka leh ee caloosha ku jira ee 8 bilood jira iyada bisad saaxiib, labadoodaba waxay u labbisteen sidii bocor
Petunia doofaarka casaanka leh ee digaaga leh ee 8 bilood jira ee sabuuradda dusheeda
Petunia doofaarka casaanka leh ee caloosha ku jira ee 8 bilood jira iyada Shiine Crest saaxiib
Doofaarrada caloosha dheri
Doofaarka caloosha dheriga
adhijirka jarmalka eeyaha yar yar ee tilmaamaha
cawl iyo cadaan cad oo indho buluug ah leh